Soursop ga-adị irè karịa ọgwụgwọ ọgwụ na ịlụ ọgụ cancer - Afrikhepri Fondation
Tọzdee, Septemba 24, 2020
min gụọ 10 min
Corossol, graviola ma ọ bụ Guanabana
Le Soursop, graviola ma ọ bụ Guanabana bụ osisi amụrụ Amazon, na Ndịda America. A na-ahụ ịdị mma ya n'ọrụ, acetogenin, nke na - enyere aka na - egbochi mkpụrụ ndụ kansa. Ọmụmụ ihe ọmụmụ amụọla ọtụtụ uru Soursop na mbelata mkpụrụ ndụ akwara n'ụdị ọrịa cancer dị iche iche. Alkaloids dị n'ụgbụgbọ na akwụkwọ nke ahịhịa a nwere mmetụta cytotoxic nke enwere ike iji ya, nke enwere ike iji gwọọ ụdị dị iche iche nke ọrịa ọjọọ, na-enweghị ịwakpo mkpụrụ ndụ dị mma. Na mgbakwunye, o nwere protein, carbohydrates, eriri, ash, calcium, phosphorus, iron, thiamine, riboflavin, niacin, ascorbic acid, amino acids, alkaloids na triterpenes.
Ọ na-enye aka iwusi usoro mmezi ahụ ike. A na-atụ aro ya na ịgwọ ọrịa afọ ọsịsa, ọnyụnyụ ọbara na ọrịa ndị ọzọ na-egbuke egbuke. A na-ejikwa ya n'ọnọdụ obi erughị ala, nchekasị na ehighi ura. Graviola, nke a makwaara dị ka soursop, mkpụrụ a sitere na Amazon nke Peru, Brazil, Caribbean, n'etiti ndị ọzọ, mkpụrụ osisi na-eto kwa ụbọchị na-ewu ewu n'ihi uru ahụike ha.
A jiri Graviola mee ihe maka afọ 40 na United States, Europe na Asia. Ọtụtụ narị akwụkwọ nyocha na ihe karịrị ụlọ nyocha iri abụọ, ọkwa sayensị kachasị elu nke National Cancer Institute, National Health Center na Mahadum US nke Purdue na Ngalaba Nkà Mmụ Ahụ Ike Ahụike nke Mahadum Katọlik nke Korea, ndị a.Ọmụmụ ihe emere gosiri na Graviola, ọrịa kansa bụ ihe ọkụkụ kachasị ike na mbara ala, ọmụmụ emere na Mahadum Purdue (USA), gosiri na acetogenins nwere graviola nwere ike ịhọrọ igbochi mkpụrụ ndụ kansa yana gbochie uto nke mkpụrụ ndụ kansa. mkpụrụ ndụ tumor, ọ bụ ya mere ụlọ ọrụ mgbanwe ụwa siri ike karị ji nwetakwa patent, mana ịbụ nsonaazụ ebumpụta ụwa abụghị patent.
Graviola na Ọrịa
Otutu ihe omumu nke di n'elu, ikwenye na Graviola, ihe omumu sayensi egosiputa uru di iche iche maka oria ogwu di iche iche, karia ndi di na ngwu ume, pancreas na prostate. Enwere ike ịrịa ọrịa cancer ma ọ bụ cytostatic. Emeela ihe omimi na vitro na vivo site na atule uto adriamycin (nke anakpo kemotherapy). A chọpụtala na Graviola bụ 10.000 ugboro ugboro karịa, na-egbu mkpụrụ ndụ kansa na-enweghị ike ịmị mkpụrụ ndụ ahụike, ma na-echebe ma na-eme ka usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ ghara ịdị.
Na 1976, Dr. Jerry McLaughlin nke Mahadum Purdue chọpụtara aconegenins ANONACEA Graviola, bụ ọgwụ mgbochi siri ike.Nchoputa nyocha a na National Cancer Institute gosiputara oru ha na oria cancer na prostate. Usedlọ Ọrụ Ahụike Obodo ji maka ọrịa kansa ndị ọzọ (afọ, akụrụ na ara).
Uru na uru nke Graviola
A na-ewere chemotherapy dị ka eke.
Agha ụkwara kpakpando na-eme ka ọ dịkwuo elu.
Mkpụrụ ndụ cancer na-enweghị na-emerụ ahụ ọkụ n'ahụ.
Ọ dị irè n'ịgwọ ọrịa kansa, gụnyere ara, pancreas, colon, prostate, huhu na imeju.
Kwesịrị ekwesị maka obese, hypertensive na ọrịa obi.
Na-egbochi uto nke etuto ọjọọ.
Na-enyere aka ịlụso ọbara shuga ọgụ (ọrịa shuga).
Ọ bụ antioxidant dị ike, ọ na-egbochi ịka nká.
Akwadoro maka ndị na-adịghị ike, karịsịa ndị okenye.
Meziwanye ndụ nke ndị nwere etuto na ọrịa cancer, mkpali, diuretic na draining, anti-mutagen (cell protection)
Ọ na - egbochi ahụ mmadụ ibute ọrịa na nje.
Graviola bụ ngwaahịa nke ejirila mee ihe iji melite usoro nchebe.
A na-eji Graviola mee ihe na-enye obi ụtọ n'ahụ dum ma dịka mgbakwunye iji nyere aka ịnọgide na-enwe ọnọdụ dị mma.
Nkwenye na ihe ize ndụ:
Ọ bụrụ na ị dị ime ma ọ bụ na-enye nwa ara, gakwuru dọkịta gị tupu ị na-eji ya, a takeụla ngwaahịa a ma ọ bụrụ na ị nwere ọrịa neurodegenerative ma ọ bụ ọrịa Parkinson.
Emeela nkwa n'ezie
Ahụmịhe nke ngwaahịa a na-akwado site na ahụmịhe ahụike nke ọgwụ ọdịnala ochie, yana nsonaazụ mara mma na enweghị nsonaazụ na-emerụ ahụ, ekwesighi ichefu na ngafe ọ bụla dị njọ. Ihe omuma a enyere bu maka ihe omuma banyere ihe omuma ya ma ebughi n’obi dochie anya dokita gi ma obu ndi nlebara anya ahuike. Graviola bụ ihe oriri na-edozi ahụ nke nwere ezigbo ọgwụ ma ọ bụ 100% eke, na-enweghị nchebe ma ọ bụ mgbakwunye.
Soursop etolite na ogbe na a na-efekarị South Asia, Papua New Guinea, Hawaii, Seychelles, Sri Lanka, na Caribbean, Central America na mba nke sub-Saharan Africa. Aha ndị a ma ama bụ Corossol: Corossol, Graviola ma ọ bụ guanabana.
Ihe kachasị pụta ìhè bụ ndị e kọọrọ mgbe ọmụmụ nke otu mahadum ahụ gosipụtara na mgbe ị na-eji mkpesa Graviola họrọ oke. Graviola na-ebibi mkpụrụ ndụ ndị iro, mgbe mkpụrụ ndụ ahụike dịgidere. Na ọgwụgwọ, a na-ebibi mkpụrụ ndụ ịmụ nwa, ọbụna mkpụrụ ndụ ntutu na sel nke afo, ka mmetụta ndị na-adịghị mma, dị ka ntutu isi na ọgbụgbọ, na-eme mgbe nile. Graviola nwere nnukwu ohere nke ịgwọ ọrịa cancer ọzọ. Na nso nso. Sayensị egosi na Njirimara nke a soursop bụ azịza na sayensị mmadụ ọtụtụ nsogbu mara na ubi ike.
Otu nnukwu ọnụ ọgụgụ nke na vitro ọmụmụ na-egosi na akwukwo wepụ, mkpụrụ, osisi na ị ga nke osisi graviola nwere anticancer bekee incredibly ike. Ọ e gosiri na bioactive Efrata nke graviola iche ma na-egbu ajọ cancer mkpụrụ ndụ 12 dị iche iche nke cancer - gụnyere ara, pancreatic, akpa ume, prostate, imeju, colon na akpụkpọ.
Eme nchọpụta na Purdue University, akwado site na National Cancer Institute, chọpụtara na wepụ nke graviola akwukwo ebibi cancer mkpụrụ ndụ "na isii mmadụ cell edoghi" na adade ihe ike igbu prostate na pancreatic cancer mkpụrụ ndụ . A ụdi ọmụmụ gosiri na wepụ nke graviola akwukwo nwere otu mmetụta na ọrịa cancer akpa ume na mkpụrụ ndụ. Ọzọ ọmụmụ si Purdue University dị na 1997 mesiri ya ike na ndị graviola ogige pụrụ ọbụna ime cancer mkpụrụ ndụ na amalitewo iguzogide nsí ọgwụ na ọgwụ ọgwụ.
Acetogenin dị ugbu a na ihe niile akụkụ nke osisi. Ọ dị ezigbo mma n'ihi na gbuo mkpụrụ ndụ cancer, yana igbochi ya cancer ịbanye ahụ. Nke a nwere ike ịbụ ezi nkpuru ka ọ kwụsị na mkpụrụ ndụ cancer.
Acetogenin est ihe na-egbochi la mmepụta de nucleotides na na-edugakarị mmepe nke sel cancer. Ọ kwụsịrị mmeputakwa ATP et NADH.
Acetogenin est ihe mgbochi na-carcinogenic nke ga-egbochi ya ngbanwe nke sel cancer.
Mara: Enyere ozi a maka ozi naanị, ị ga-achọrịrị ndụmọdụ dọkịta.
mkpụrụ osisi Graviola 500mg - igbe ọnwa 4 - usoro onunu ogwu dị elu - Capsules 120
Zụta € 23,95
Mpempe akwụkwọ graviola 360 x 2000mg 4: 1 wepụ mkpụrụ osisi vegan, ...
Zụta € 36,22
Graviola 500mg -! IHE ọnwa isii! - - Mkpụrụ osisi graviola - Igbe nke ...
Zụta € 31,95
Iwu nke Teosophy - Annie Besant (PDF)
Ebumnuche mmadụ sitere na mbadamba ụrọ Sumerian - akụkụ 1 (Audio)